आइओएम डिन – Health Post Nepal
चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइएओएम) मा तीन दशकभन्दा लामो समय सेवा गरेका दुई चर्चित चिकित्सक डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा. अरुण सायमीले एकै दिन बिहीबार अवकाश पाएका छन्। फिजिसियन डा. अग्रवाल निवर्तमान डिन हुन भने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सायमी पनि...